▷ Ihe mkpuchi mmiri kacha mma maka akwarium | Nke azụ
Natalia Cerezo | 20/08/2021 10:14 | Ngwa
Ihe mkpuchi mmiri bụ ihe dị oke mkpa iji sachapụ mmiri nke na -esite na mgbata ma mee ka ọ dabara ka azụ gị nwee ike ibi n'ime ya na -atụghị egwu klorine na ihe ndị ọzọ dị na mmiri mgbata nke na -emerụ ahụike.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ya ngwaahịa ngwaahịa mmiri kacha mma, na mgbakwunye na ịgwa gị ihe ihe mkpuchi oyi bụ, mgbe ọ dị mkpa iji ya na otu esi eji ya.. Na mgbakwunye, anyị na -akwado ka ị gụọ akụkọ ndị ọzọ gbasara kedu mmiri ị ga-eji na aquariums ịghọ ezigbo ọkachamara.
1 Ndị na -ahụ maka mmiri aquarium kacha mma
2 Kedu ihe bụ ihe mkpuchi mmiri aquarium na gịnị ka ọ bụ?
3 Ndị na -ahụ maka mmiri aquarium kacha mma
3.1 Ihe mkpuchi mmiri zuru oke
3.2 Tetra Aqua Nchekwa maka mmiri mgbata
3.3 Conditioner nwere ọtụtụ ojiji
3.4 Ihe nhicha mmiri akwarium
4 Kedu mgbe ọ dị mkpa iji ihe mkpuchi mmiri akwarium?
5 Etu esi eji ihe mkpuchi mmiri akwarium
6 Ebe ị ga -azụta ihe mkpuchi mmiri akwarium dị ọnụ ala
Ndị na -ahụ maka mmiri aquarium kacha mma
Mmiri nzacha ...
Onye na -asacha mmiri JBL ...
Igwe ntutu ntutu Seachem ...
Kedu ihe bụ ihe mkpuchi mmiri aquarium na gịnị ka ọ bụ?
Ihe na -ekunye mmiri, dị ka aha ya na -egosi, bụ a ngwaahịa na -enye gị ohere ịgwọ mmiri mgbata, nke ga -emerụ azụ, ma tinye ya ka ọ gbanwee ya ka ọ bụrụ ebe ha ga -ebi.
Yabụ, mgbe ahụ, ihe mkpuchi mmiri bụ ite mmiri juru na ya, mgbe a tụbara ya n'ime mmiri (na -agbaso ntuziaka ngwaahịa a, n'ezie) Ọ bụ ha na -ahụ maka ikpochapụ ihe ndị ahụ, dị ka chlorine ma ọ bụ chloramine, nke na -emerụ azụ gị.
N'ahịa ị ga-ahụ ọtụtụ ndị na -eku ume mmiri, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile nwere otu àgwà ma ọ bụ na -eme otu ihe, yabụ ọ dị mkpa na ịhọrọ ngwaahịa kacha mma (ka emechara anyị na -ekwu maka ahụike azụ gị). Anyị kwadebeere gị nhọrọ kacha mma:
Ihe mkpuchi mmiri zuru oke
Seachem bụ akara dị mma nke nwere otu ihe mkpuchi mmiri zuru oke n'ahịa. O nwechaghị ma ọ bụ na -erughị nha anọ ị nwere ike ịhọrọ dabere na oke mmiri nke akwarium gị nwere (50 ml, 100 ml, 250 ml na 2 l), n'agbanyeghị na ọ na -agbasa nke ukwuu, ebe ọ bụ naanị na ị ga -eji 5 ml (otu okpu) nke ngwaahịa maka lita mmiri 200 ọ bụla. Seachem Conditioner na -ewepu klorine na chloramine ma kpochapụ amonia, nitrite na nitrate. Na mgbakwunye, ịnwere ike iji usoro dị iche iche, dịka ihe ngosi ngwaahịa ahụ si dị, iji mee ka ha kwekọọ na nsogbu mmiri. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ nwere chloramine dị oke elu, ị nwere ike iji okpukpu abụọ, ebe ọ bụrụ na ọ pere mpe, ọkara ọkara ga -ezu (anyị na -ekwusi ike ka ị lelee nkọwa ngwaahịa tupu ịme ihe ọ bụla).
Tetra Aqua Nchekwa maka mmiri mgbata
Ngwaahịa a bara ezigbo uru, kemgbe na -enye gị ohere ịgbanye mmiri mgbata ka ọ bụrụ mmiri dị mma maka azụ gị. Ọrụ a yiri nke ngwaahịa ndị ọzọ dị n'ụdị a, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ịwụsa ngwaahịa a n'ime mmiri (ka emechara, na ngalaba ọzọ, anyị ga -egosi gị otu esi eme ya). Ọ bụ ezie na ọ gbasaghị ebe niile dị ka Seachem, ebe ọ bụ na oke ya bụ 5 ml kwa lita 10 nke mmiri, ọ nwere usoro na -atọ ụtọ nke na -echebe gills na akpụkpọ anụ mucous nke azụ gị. Na mgbakwunye, ọ na -agụnye ngwakọta nke vitamin nke na -enyere aka belata nchekasị maka anụ ụlọ gị.
Conditioner nwere ọtụtụ ojiji
A na -ahazi ụfọdụ ndị na -eme mkpọda, dị ka nke a sitere na Fluval, iji dozie mmiri n'oge mgbanwe mmiri, kamakwa Enwere ike iji ha mee ka azụ dị ọhụrụ banye na akwarium, maka mgbanwe mmiri na -ezughị ezu ma ọ bụ ibuga azụ na akwarium ọzọ. Ọ dị mfe iji dịka ụdị ndị ọzọ, ọ na -ewepu chlorine na chloramine, na -ewepụ nnukwu ọla nke nwere ike ịdị na mmiri ma na -echebe nku azụ. Na mgbakwunye, usoro ya gụnyere ngwakọta nke ahịhịa dị jụụ na -enyere aka belata nchekasị.
Ihe nhicha mmiri akwarium
N'etiti ndị na -asachapụ ihe ma ọ bụ ihe na -eku ume maka aquariums mmiri dị ọhụrụ anyị na -ahụ ngwaahịa a dị mma, Biotopol, nke, yana oke nke 10 ml nke ngwaahịa kwa lita mmiri 40. bụ ọrụ maka iwepu chlorine, chloramine, ọla kọpa, lead na zinc. Ị nwere ike iji ya na mgbanwe mmiri zuru oke na nke ele mmadụ anya n'ihu, na mgbakwunye, ọ na -enyere aka meziwanye azụ nke gbakere n'ọrịa, ebe ọ gụnyere, dịka ngwaahịa ndị ọzọ, ngwakọta nke vitamin nke na -enye aka belata nchekasị.
Ihe nchacha mmiri a na-abịa na karama ọkara lita ma enwere ike iji ya na akwarium ebe azụ na nduru bi na mmiri dị ọhụrụ.
Mfe ndụ AQM0250 ...
Ihe mkpuchi mmiri a dị mfe, nke dị na karama 250 ml, na -eme ihe o kwere ná nkwa: ọ na -etinye mmiri mgbata ma mee ka ọ dị njikere maka azụ gị site n'iwepụ chlorine, chloramine na amonia. Ọrụ ya dị nfe dịka ndị ọzọ, ebe ọ bụ naanị na ị ga -agbakwunye ego egosipụtara ngwaahịa a na lita mmiri egosipụtara. Ị nwere ike iji ya na mgbanwe mmiri mbụ yana na partials, a nwekwara ike iji ya na akwarium ebe mbe na -ebi.
Kedu mgbe ọ dị mkpa iji ihe mkpuchi mmiri akwarium?
Ọ bụ ezie na mmiri mgbata na -adịkarị mma ka ụmụ mmadụ drinkụọ (n'agbanyeghị na ọ bụghị mgbe niile ma ọ bụ ebe niile), ọnụ ọgụgụ ihe adịghị mma maka azụ adịghị agwụ agwụ. Site chlorine, chloramines ruo ọbụna nnukwu ọla dị ka ndu ma ọ bụ zinc, mmiri mgbata abụghị ebe dị mma maka azụ anyị. Yabụ, na-eche maka ọdịmma gị oge niile, ọ dị mkpa iji ihe mkpuchi mmiri site na oge mbụ.
Igwe ncha mmiri na -enye ohere ka ọ dị otu a. Iji nye ọmụmaatụ, ha na -ahapụ mmiri mgbata dị ka kwaaji efu nke azụ gị nwere ike ibi na ya n'enweghị nsogbu. Mgbe ahụ, ị ​​nwedịrị ike iji ngwaahịa ndị ọzọ na -emeziwanye usoro ndụ (ya bụ, dịka ọmụmaatụ, bute nje "dị mma") mmiri dị na akwarium gị wee si otú a melite ogo ndụ azụ na azụ gị.
N'ikpeazụ, Ọ dịkwa mkpa ka ị ghara ịkpa oke iji ihe mkpuchi ahụ na mgbanwe mmiri mbụ. Soro ntuziaka dị na ngwaahịa a, nke ga -agwa gị otu esi eji ya, na -enwekarị obere ọgwụ, na mgbanwe mmiri na -ezughị ezu, ma ọ bụ ọbụna dobe azụ nke bịarutere, melite usoro ahụ ha ji alụso ọrịa ọgụ mgbe ọrịa gasịrị ma ọ bụ belata nchekasị.
Etu esi eji ihe mkpuchi mmiri akwarium
Ọrụ nhazi mmiri maka akwarium enweghị ike ịdị mfe, agbanyeghị, ọ na -ebutekarị obi abụọ na anyị ga -ewepụ.
Nke mbu ihe mkpuchi ahụ na -arụ ọrụ naanị site n'ịgbakwunye ya na akwarium, ma ọ bụ maka mgbanwe mmiri ma ọ bụ maka mgbanwe ihu (dịka ọmụmaatụ, mgbe ịpịpụsịrị ike ala).
Otu n'ime obi abụọ a na -enwekarị bụ ma enwere ike itinye ihe mkpuchi ahụ mgbe azụ nọ n'ime akwarium. Azịza ya bụ na, site na iji ihe nrụpụta kacha mma, enwere ike ịme ya, n'ihi na ha na -agbasa n'ime mmiri n'otu ntabi anya. Agbanyeghị, ndị ọzọ na -eme nwayọ nwayọ, yabụ ọ ka mma, ijide n'aka na ihe niile na -aga nke ọma, na debe azụ gị n'akụkụ dị iche iche mgbe ị na -agbakwunye ihe mkpuchi mmiri.
Ị nwere ike weghachite azụ gị na mmiri n'ime nkeji iri na ise, ogologo oge ọ na -ewe ka ndị na -eji nwayọ nwayọ gbasaa ma rụọ ọrụ n'ime mmiri niile.
Na mkpokọta, ihe mkpuchi mmiri dị mma maka azụ gị, mana ha nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ịrapara na nkọwapụta ngwaahịa. N'ihi na, Ọ dị mkpa ka ị rapara na nkọwapụta yana etinyekwala usoro onodu oyibo.
N'ikpeazụ, n'ime akwarium ọhụrụ, ọbụlagodi na ị na -eji mmiri na -edozi mmiri ị ga -echere otu ọnwa iji gbakwunye azụ gị. Nke a bụ n'ihi na aquariums ọhụrụ niile ga -agarịrị usoro ịgba ịnyịnya tupu ị nweta azụ.
Ebe ị ga -azụta ihe mkpuchi mmiri akwarium dị ọnụ ala
I nwere ike ịchọta ihe mkpuchi mmiri n'ọtụtụ ebe, karịsịa na ụlọ ahịa pụrụ iche. Dị ka ọmụmaatụ:
En Amazon Ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ ndị na-ehicha ihe dị elu, kamakwa yana ọnụ ahịa dị iche na ọrụ dị iche iche (ihe mkpuchi dị ọcha na nke siri ike, mgbochi nrụgide…). Ihe dị mma gbasara ụlọ ahịa mega a bụ na, ọ bụrụ na ị buterela nhọrọ Prime, ị ga -enwe ya n'ụlọ n'otu ntabi anya. Na mgbakwunye, ihe ndị a na -ekwu ga -eduzi gị iji mara nke dabara gị mma.
En ụlọ ahịa anụ ụlọ ọpụrụicheDị ka Kiwoko ma ọ bụ Trendenimal, ị ga -ahụkwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ntụ oyi. Na mgbakwunye, ha nwere ụdị anụ ahụ, yabụ ị nwere ike banye n'onwe gị jụọ ajụjụ nwere ike ibilite.
Agbanyeghị, na -enweghị mgbagha, onye nwere ọnụ ahịa na -enweghị atụ bụ Chain nnukwu ụlọ ahịa yana ọgwụgwọ ya maka Dr Wu mmiri mgbata mmiri, site na akara Tetra. Agbanyeghị, n'ihi nha ya, a na -atụ aro ya maka obere tankị na tankị azụ, ọ bụghị maka ndị amateurs nwere oke tankị nke ọdọ mmiri Titicaca, bụ ndị akwadoro ụdị na ụdị ndị ọzọ.
Ihe mkpuchi mmiri akwarium bụ ihe na -enye ohere ka mmiri bụrụ ebe dị mma maka azụ anyị. Gwa anyị, kedu ọgwụgwọ ị na -eji maka mmiri? Enwere ụdị ika nke masịrị gị, ma ọ bụ na ịnwalebeghị iji ihe mkpuchi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Ihe mkpuchi mmiri nke akwarium